जहाँ चिच्याएर मागिन्छ वर ! spacekhabar
जहाँ चिच्याएर मागिन्छ वर !
स्पेसखबर पाल्पा, २१ कात्तिक
सत्यवती तालमा अघिल्लो वर्ष लागेको मेला । फाइल तस्बिर
हिन्दूधर्मानुसार मन्दिरमा गएर भगवानसँग मनमनै ‘वर’ माग्नु नौलो होइन । तर, यहाँको सत्यवती ताल र माईको मन्दिरमा भने सबैले सुन्ने गरी चिच्याएर ‘वर’ माग्ने चलन छ ।
तिनाउ गाउँपालिका ४ मा रहेको सत्यवती तालको वरपर तीनपटक घुमेर सार्वजनिक रूपमै चिच्याएर ‘सत्यवती बज्यै’ सँग वर माग्ने यहाँको पुरानो चलन हो । ३ दिन चल्ने मेला कात्तिक २४ गतेबाट सुरु हुँदै छ । सत्यवती ताल क्षेत्रमा कानले नसुन्ने बज्यैसँग चिच्याएर वर माग्ने धार्मिक मेला प्रत्येक वर्षझैँ यो वर्ष पनि आइतबारबाट सुरु हुँदै छ । सत्यवती ताल क्षेत्रमा बाजेबज्यै दुवैको मन्दिर रहे पनि विशेष गरी बज्यैसँग चिच्याएर वर माग्दा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
सत्यवती बज्यैले कानले सुन्दिनन् भन्ने जनविश्वास छ । त्यसैले पुस्तौँदेखि चिच्याएर वर माग्ने गरिएको हो । वर माग्न र सत्यवती माईको दर्शन गर्न जानेले बाँस र पातीको लिंगो साथमै लिएर जान्छन् । सोही लिंगोलाई तालको छेउमा गाडेर पूजा गर्ने चलन रहेको सत्यवती ताल विकास समिति अध्यक्ष तिलबहादुर गाहाले बताए ।
सत्यवतीमा पूजाअर्चना गर्दा मागेको पूरा हुने भएपछि यहाँ बलि चढाउने भीड लाग्ने र चिच्याएर वर माग्ने कारण चहलपहल बढ्दो हुने अध्यक्ष गाहाले बताए । उनका अनुसार यसपालि पूजा गर्ने साइत पनि परेको दाबी छ । मेलामा देश तथा विदेशबाट झन्डै ३ लाख पर्यटक आउने गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीको विश्वास छ ।
सत्यवती तालको महत्त्व
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले सत्यवती ताल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । पहाडको उच्च भागमा रहेको ताल क्षेत्र सधैँ चिस्यान रहने हुँदा शीतल हावाका लागि पर्यटक त्यहाँ पुग्न रुचाउँछन् । वन, वातावरण र जैविक विविधताको हिसाबले यस क्षेत्रको महत्व रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
४ रोपनीमा फैलिएको ताल क्षेत्र सीमसार क्षेत्रमा रहेको दुर्लभ मानिन्छ । चुरे र सीमसार क्षेत्रमा कमै मात्रामा ताल हुने र त्यसमध्येकै यो एउटा महत्त्वपूर्ण ताल छ । ताल वरिपरि पर्यटकका लागि व्यवस्थित गोरेटो बाटो बनाइएको छ ।
ताललाई ३ पटक घुम्दै वर माग्नुपर्छ । स्थानीय संस्कृतिअनुसार चिच्याएर वर जसले माग्छ, उसलाई पूरा हुने विश्वासका साथ चिच्याउने गर्छन् । त्यसपछि तालको छेउमा बाँसको लिंगो गाडेर पूजा गर्ने चलन छ । त्यहाँ पूजा गरी बज्यैको मन्दिरमा दर्शन गरी टीका ग्रहण गर्न सकिने मन्दिरका सचिव लालबहादुर दर्लामी बताए । मन्दिरनजिकै पूजा गर्ने स्थान तोकिएको छ । त्यहाँ बलि चढाउने चलन पनि छ । बोका, पाथी, हाँस, राँगा चढाउने चलन छ ।
रुपन्देहीको बुटबल उपमहानरपालिका क्षेत्रबाट आउनेलाई दोभानको झुम्सा पानीमिलबाट पूर्व दिशातर्फ पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ । करिब ६ किमि उकालो यात्रा सकेपछि सत्यवती क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ । सत्यवती क्षेत्रमा उकालो हिँड्नु पर्दैन । झम्सादेखि करिब २ घण्टामा सत्यवती पुग्न सकिन्छ ।
पाल्पाको तानसेन हुँदै सत्यवती ताल पुग्न करिब २ घण्टा लाग्छ । पाल्पा तानसेन सडकको चौबीस माइलबाट करिब २ घण्टा उकालो यात्रा गरेपछि सत्यवती ताल पुगिन्छ । मेला अवधिभर यातायातको साधन सञ्चालनमा समितिले रोक लगाएको छ । भक्तजनका कारण बाटोमा भीड हुने भएकाले यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको छ । -रासस
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २१, २०७६, १०:५६:००